लकडाउनमा नायिका वर्षालाई पशुपंक्षीको चिन्ता, आफैँ बाँड्दैछिन् खाना !Tamsaling Tv
काठमाडौं Amir Dong संगीतकार कोरोना गीत बसन्त Sangdup Ngyasur Tamang Shashi kala Moktan Ysk group Kawang lama Yangsang lama
लकडाउनमा नायिका वर्षालाई पशुपंक्षीको चिन्ता, आफैँ बाँड्दैछिन् खाना !
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ११:०१ प्रकाशित
चैत्र १९, काठमाडौं । यतिबेला देश पुरै लकडाउन छ । हुनेखानेहरु घरमै परिवारसँग बसेर दिनैपिच्छे मिठा–मिठा परिकारहरु खाँदै दिन कटाउँदै छन् । हुँदा खाने तथा दैनिक ज्याला मजदुरीले छाक टार्नेहरु भोक र शोकमा छन्– ‘परिवार कसरी पाल्नु !’ हुँदा खाने हुन् या हुनेखानेहरु हुन्, सबैलाई आफ्नै पेटको चिन्ता छ । लकडाउनबाट आइलाग्ने आर्थिक संकट र भोकमरीको परिकल्पना गर्दै त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।
आफ्नै परिवारको चिन्तामा डुबेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानव आश्रित ती जनावरको चिन्ता कसले गर्ने ? परिवारकै चिन्तामा डुबेपनि अधिकांशको मनमा कतै न कतै यो चिन्ता पक्कै छ कि– ‘ती जनावर के खाएर बाँच्लान् !’ तर कसले भर्ने तिनीहरुको पेट ? कतिपयले भने आफ्ना वरिपरिका पशुपंक्षीहरुलाई आफूले सकेजति गाँस काटेर खुवाइरहेका छन् । नायिका वर्षा शिवाकोटी पनि यतिबेला आफ्नो घर छेउका कुकुरहरुलाई खाना खुवाइरहेकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कुकुरलाई खाना बाँड्दै गरेकाे तस्विरहरु पोष्ट गर्दै उनले लेखेकि छिन्– ‘दिनदिनै नयाँनयाँ परिकारहरु घरमा बनाएर खाइरहेका छौँ तर यीनीहरुको बारेमा कसले सोच्ने ? जो हाम्रो खानामा निर्भर छन् । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि उनीभित्र कलाकारिता मात्रै होइन, पशुपंक्षीप्रतिको प्रेम पनि छ ।
‘न बोल्न नै सक्छन्, न भोक लाग्यो भन्न नै ! हामी सबैमा यीनीहरुप्रति माया नहोला तर मानवता भने पक्कै छ ! आफ्नो घर वरिपरिका जनावरहरुलाई आफूले सक्ने सम्म खाना खुवाउँ’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यतिबेला नेपालसहित कयौँ देश लकडाउनमा छन् । विश्भर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेकाे संख्या आज बिहानसम्म मात्रै ४२ हजार नाघिसकेको छ भने ८ लाख ५८ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । नेपालमा भने हालसम्म पाँच जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखा परेको छ । एकजना निको भइसकेका छन् भने अन्य ४ जनाको अवस्था सामान्य छ ।
नायिका वर्षाले यसअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै भनेकी थिइन्– ‘देश लकडाउन छ । आजको दिनसम्म देशभित्र यो भयानक रोग कोरोना भाइरसले कसैको ज्यान लिएको छैन । म भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु कि हाम्रो देश र हामी नेपाली कसैलाई केही नहोस् ।’
क्याप्टेन बिजय लामा अभिनित हिमालकी रानी युट्युबमा सार्वजनिक ।
मृगौला पिडित सुवास सुब्बा गोले तामाङलाई दोहामा बस्ने नेपालीहरुले पठाए सहायोग रकम :
चम चम गीतले राख्यो ऐतिहासिक रेकर्ड,बन्यो मिलियन भ्युज पाउँने पहिलो तामाङ अडियो गीत:
१. क्याप्टेन बिजय लामा अभिनित हिमालकी रानी युट्युबमा सार्वजनिक ।
२. मृगौला पिडित सुवास सुब्बा गोले तामाङलाई दोहामा बस्ने नेपालीहरुले पठाए सहायोग रकम :
३. चम चम गीतले राख्यो ऐतिहासिक रेकर्ड,बन्यो मिलियन भ्युज पाउँने पहिलो तामाङ अडियो गीत:
४. थोरैले मात्र भ्वाईसमा सेलेक्ट भएका ध्रुब तामाङ जसले कोच राजुको मन जितेरै छाडे:
५. मेलोडी किङ निमा दोङको नयाँ उचाईँको गीत सेम डासी सार्वजनिक:
१. थोरैले मात्र भ्वाईसमा सेलेक्ट भएका ध्रुब तामाङ जसले कोच राजुको मन जितेरै छाडे:
२. मेलोडी किङ निमा दोङको नयाँ उचाईँको गीत सेम डासी सार्वजनिक:
४. महानायक अमिर दोङ अभिनित गीत तिङला गुङरी सार्वजनिक:
५. मृगौला पिडित सुवास सुब्बा गोले तामाङलाई दोहामा बस्ने नेपालीहरुले पठाए सहायोग रकम :
ताम्सालिङ टिभि सम्पर्क:
Tamsaling TV Pvt.Ltd.
सुचना बिभाग दर्ता नं. ……..
अध्यक्ष- प्रदिप थिङ्ग
प्रधान सम्पादक: तुला माया तामाङ
सम्पादक – सर्मिला श्रेष्ठ
प्रवास ब्युरो – ज्ञान लामा थोकर
प्रवास ब्युरो – सुनिल तामाङ
रिपोर्टर- विजय लामा थिङ्ग(मकवानपुर)
क्यामेर/इडिट- सुनिल राज लामा
आइटी सपोर्ट- गणेश बज्र लामा
ताम्सालिङ टिभीको उदेश्य:
नेपाली नेपालीको स्वाभिमान जाती – जाती प्रतिको प्रेम अनि एकता, इतिहास मनोरञ्जन पल पलको खबर, राट्रिय कोणमा सामुदायिक आवाज ताम्सालिङ टिभी
सामाजिक सन्जालमा हामी:
© 2020 Tamsaling Tv| All rights Reserved.